कण्डम बिना नै बच्चा नबस्नेगरी कसरी शारिरिक सम्पर्क गर्ने ? यस्तो छ डा. नुतनको सल्लाह – jagritikhabar.com
कण्डम बिना नै बच्चा नबस्नेगरी कसरी शारिरिक सम्पर्क गर्ने ? यस्तो छ डा. नुतनको सल्लाह
महिलाहरु प्रायजसो गर्भवती भएको थाहा पाउन प्रेग्नेन्सी किटको प्रयोग गर्ने गर्छन् । कतिपय महिलाहरु मेडिकलसम्म गएर किट ल्याउन लजाउने हुन्छन् ।
महिलाका लागि आवश्यक प्रेग्नेन्सी टेस्ट गर्न घरेलु तथा प्राकृतिक तरीका पनि अपनाउन सकिन्छ ।
जसले गर्भवती भए नभएको पत्ता लगाउन सहयोग गर्छ ।
दैनिक जीवनमा प्रयोग गरिने टुथपेस्ट सबैको घरमै हुन्छ । गर्भवती भएको पत्ता लगाउन शारिरीक सम्पर्क भएपछि महिलाले टुथपेस्टमा आफ्नो पिसाव मिसाउने, यदि पेस्ट नीलो भएमा सम्झिनुस् कि टेस्ट पोजिटिभ छ । अर्थात तपाई गर्भवती हुने सम्भावना रहन्छ ।
यदि तुरुन्त प्रेग्नेन्सी टेस्ट गर्ने हो भने घरमै रहेको भिनेगरको प्रयोग गर्न सकिन्छ । भिनेगरमा पिसाव मिसाउँदा रंगमा कुनै परिवर्तन आएमा बुझ्नु पर्छ कि टेस्ट पोजेटिभ अर्थात् गर्भवती भएको संकेत हुन सक्छ ।
प्राचिन कालमा गर्भवती टेस्ट गर्नका लागि गहुँ वा जौको प्रयोग गरिन्थ्यो । गहुँ वा जौमा पिसाव मिलाउने, यदि गहुँ वा जौ टुसाएमा गर्भवती भएको संकेत हुन सक्छ ।
गर्भवती भएको पत्ता लगाउनका लागि चिनी पनि धेरै लाभदायक मान्निछ । चिनीमा आफ्नो पिसाव मिसाउँदा घुलेमा टेस्ट नेगेटिभ रहेको थाहा पाउन सकिन्छ । तर, चिनी गुच्छा भएमा सम्झनुहोस् की तपाई गर्भवती हुन सक्ने संभावना रहन्छ ।